Filoha Rajaonarimampianina : “Manaraka ho azy ny mpamatsy vola rehefa miasa isika” | NewsMada
Niteraka adihevitra politika ny kabarin’ny solontenan’ny masoivoho vahiny tamin’ny lanonam-pifampiarahabana teny Iavoloha. Namaly ny filohan’ny Repobika: “Manaraka ho azy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena rehefa miasa isika”.
“Tsy maintsy miara-mampandroso ny firenentsika isika. Manaraka ho azy ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Rehefa hitany fa mandroso isika, vao mainka hanampy antsika bebe kokoa izy ireo.” Kabarin’ny filoha Rajaonarimampianina, tamin’ny lanonana fizarana vatsin’ankohonana, tany Mahavelona, Toamasina, omaly, io.
Karazana famaliana ny kabarin’ny solontenan’ny masoivoho vahiny tamin’ny fifampiarahabana teny Iavoloha, ny 8 janoary, izany, fa tsy tokony hiantehitra amin’ny mpamatsy vola ny Malagasy amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara.
Nataony ohatra àry fa nandramana ny vatsin’ankohonana tany amin’ny faritra Vakinankaratra, volana septambra 2014. Tsy ampy herintaona sy tapany, tsy nisalasala ireo mpamatsy vola nanome 40 tapitrisa dolara hanampiana. Satria fantany fa vonona sy miasa isika, mipaka any amin’ny vahoaka ny asa atao. Nefa mila fotoana fikarakarana ny famatsiam-bola sy ny fandresen-dahatra ny mpamatsy vola.
Aleo mba samy handini-tena…
“Efa 50 taona mahery no nahazoantsika ny Fahaleovantena, efa 50 taona mahery no nandraisantsika an-tanana ny fiainan’ny firenentsika: nankaiza isika? Aleo mba samy handini-tena amin’izao fiandohan’ny taona izao”, hoy izy.
Rehefa jerena ny tahan’ny fahantrana, vao mainka miharatsy. Inona no anton’izany? Be ny krizy, be ny olana. Tsy ny avy any ivelany no mahatonga izany, fa isika ihany. Mila amboarina ny toe-tsaintsika, mila ovana ny fomba fijerintsika. “Tsy ny omaly no jerentsika. Raisintsika ny omaly ho fanoitra hampandrosoana ity firenena ity”, hoy ihany izy.
“Handeha lavitra amin’ny fampandrosoana maharitra izahay”, hoy izy tamin’ny tomponandraikitra eo anivon’ny Banky iraisam-pirenena. Manantena izy fa tetikasa mandalo amin’ny taona vitsivitsy ihany ny vatsin’ankohonana. Satria horaisina an-tanana ny fampandrosoana ny firenena, hivoahana amin’ny fahantrana.